प्रज्ञा भवनमा नेकपाको कार्यक्रम : यसरी सजाइयो आकर्षक मञ्च !
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया अन्तर्गत जिल्ला तहका अध्यक्ष र सचिवको घोषणा सोमबार हुँदैछ ।
जिल्ला तहका पदाधिकारीको घोषणाका लागि काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
लेनिन जयन्ती र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा भइरहेको जिल्लाका पदाधिकारी घोषणा कार्यक्रमका लागि मञ्च सजाएर आकर्षक बनाइएको छ ।
मञ्चमा तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यभित्र माओवादीको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसियाहतौडा राखिएको छ । मञ्चमा चुनाव चिह्नको चित्रलाई महत्त्वका साथ ठूलो स्थान दिइएको छ ।
मञ्चमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ७० औं वार्षिकोत्सव समारोह लेखिएको छ भने लेनिनको पूर्णकदको प्रतिमा राखिएको छ । कम्युनिस्ट नेताहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी, सहाना प्रधान लगायतको तस्वीर समेत मञ्चमा राखिएको छ ।
जिल्ला तहका पदाधिकारीको घोषणा र एकता प्रक्रिया टुंगिने भएका कारण प्रज्ञा भवनमा नेकपाका नेता कार्यकर्ता भेला भइरहेका छन् ।
भारतीय जासुस प्रमुखको रहस्यमय काठमाडौँ यात्रा : भेट्न जाने, मुख नखोल्ने नेपाली नेताहरू !
प्रधानन्यायाधीश राणा र रुसी सर्वोच्च अदालतका अध्यक्षबीच भेटवार्ता काठमाडौँ–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र रुसी महासङ्घको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष भ्याचेस्लाभ एम लेवेदेभबीच आज भेटवार्ता भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको...
नीलोलाई किन दुःखको रंग मानिन्छ ?
विवाहपछि यसकारण मोटाउछन् मानिस
लेखाइले व्यक्तित्वबारे धेरै जानकारी दिने गर्छ
संसारका सबभन्दा महंगा खानेकुरा यी हुन्